Ukusika iindevu: Fumanisa iiMilo zeNwele zakho zobuso | Amadoda aQinisekileyo
Ngaba uyayazi indlela eyahlukileyo yokusikwa kweendevu? Kuyimfuneko kuphela ukubeka unyawo esitratweni ukujonga ukuba iinwele zobuso zikwifashoni. Kwaye ayisiyiyo nje malunga neendevu zakudala, kodwa malunga neenwele zobuso kuzo zonke iintlobo.
Makhe sibone ukusika kweendevu ongazifaka ebusweni bakho nendlela yokwenza ngayo. Izitayile ezahlukeneyo zamadevu, iibhokhwe kunye neendevu ezipheleleyo phakathi kwazo ekunokwenzeka ukuba okulandelayo kuya kufumaneka.
1 Yintoni intshebe yokunqanda iindevu?
2 Izitayile zamadevu
3 Izimbo zeKnob
4 Izimbo zeendevu
4.1 Iindevu ezimfutshane, ukubheja okukhuselekileyo
Yintoni intshebe yokunqanda iindevu?
Ibinzana lokusika iindevu libhekisa kumzobo olandela iinwele zobuso ebusweni. Musa ukudideka nobude. Lo mzobo okanye imilo inokuba yeyendalo, ngaphandle kongenelelo oluncinci okanye olungenalo kwicala lakho. Kodwa amadoda amaninzi akhetha ukunxiba ukujonga okusebenzayo. Ngayiphi na imeko, kuhlala kufanelekile ukujonga imeko yendalo kwiziphumo.
Indawo ephambili ekusikeni iindevu ngamacala. Ukutshintsha ukuphakama kunye nobukhulu kunokwenza iindevu (kwaye ke ngokunjalo nobuso) zibonakale zahluke ngokupheleleyo. Nangona kunjalo, indawo esembindini inokutshintshwa ngeendlela ezininzi ukuze zilungele ukhetho lwakho. Ngokulandelanayo, Unokuchaza iindawo ezahlukeneyo zeenwele zakho zobuso ngokokuthanda kwakho, omabini amacala kunye nenxalenye yomhlathi.
Kwiindevu ezithile, inye okanye iinxalenye ezininzi zeenwele zobuso zichetyiwe (kuqinisekiswa ukufumana isiphumo esilinganayo, ngokwendalo). Kukho indibaniselwano emininzi, eyonyuka nangakumbi ukuba songeza iindlela ezahlukeneyo zokunciphisa ezi ndawo.
Amadevu anokugubungela yonke imilebe ephezulu ngesitayile Ngama-80 Kwaye ungade uye ezantsi emacaleni ukuze wenze ihashe elinesibindi. Ukuba ukhetha into encinci, ungayinqumla phezulu kumadevu amade amade aneempawu ezomeleleyo zeklasikhi.
Ngaba unesibindi sokudibanisa ukubuyela ecaleni kunye nemadevu? Olu hlobo lufana nentshebe emfutshane kodwa ngesilevu esichebiweyo. Umzobo usuka kwindlebe uye kwenye uye ngomlomo ongaphezulu. Ukuba uyayithanda le ngcamango kodwa ukhetha ukubuyela ecaleni ukuba ungabonakali kangako, qiniseka ukuba iindevu zinqanyuliwe kwiindawo ezisemacaleni. Cinga ngomadevu wehashe oqala uye ezantsi emva koko unyuse umhlathi, kodwa, ngokungafaniyo nokusikwa kwangaphambili, awufikeleli kumanxeba asecaleni, kodwa uyema kwelona xesha libanzi lomhlathi.
Ngale ndlela, ukhetho onalo kumadevu akho zezi:
Amadevu aneentsimbi ezisemacaleni
Ngaphezulu kwale migca ungabona iqhina le-anchor elinamadevu amancinci. Mhlawumbi uyazi ne-classic version, apho phezulu kunye nezantsi zixhunyiwe ukudala isikwere okanye imilo ejikeleziweyo. Ukuba ukhetha ibhokhwe enqanyuliweyo okanye amadevu adadayo, jonga isitayile seRoyale (ububanzi ngokulinganayo phezulu nasezantsi) okanye iVan Dyke (ebanzi ngaphezulu phezulu).
Unako nokukhulisa ibhokhwe ngaphandle kwamadevu. Imalunga nokucheba yonke into ngaphandle kwesilevu kwaye inokunikwa ububanzi obufanayo nasesilevini okanye iyenze inyuke iye ezincwadini okanye ihlale kufutshane nayo. Kule ndlela ungongeza inqwaba yeenwele kumlomo ongezantsi okanye ulinganisele umgca osuka kwitempile enye uye kwenye. Okokugqibela, unokuyicheba emacaleni ukuyenza icutheke. Inokuba ncinci njengomgca wokuma nkqo kumbindi wesilevu.
Makhe sijonge ukusikwa kweendevu zebhokhwe:
Iqhina eliqhelekileyo (phezulu kunye nezantsi ixhunyiwe)
Ibhokhwe Van Vanke
Ibhokhwe engenamadevu kunye nokutshiswa kwamacala
Ibhokhwe engenamadevu ngaphandle kokutshiswa ngamacala
Zonke iinwele zobuso zivunyelwe ukuba zikhule. Kuyimfuneko ukuba imfuza ihambisane kakhulu, ngakumbi ukufezekisa iindevu ezinde nezingqindilili. Xa kufikwa kwiindevu ezinde, akuyomfuneko ukuba ungenelele kakhulu kwimigca. Ekuphela kwento edla ngokwenziwa kukuyicutha entanyeni (nakwezinye iindawo kuphela xa kufanelekile). Ukuyiyeka ikhule ngesantya sayo kusebenza ukuthanda kweendevu, kodwa ngokwendalo kuya kufuneka ugcine iinwele ezingalawulekiyo zisikere kwaye usebenzise iimveliso ezinje Amafutha eendevu.
kunjalo, ungatshintsha imigca yendalo ngoncedo lwesitshetshe sakho ukuba ubona kufanelekile. Amanye amadoda abeka isidlele emgceni osezantsi kuba ngaloo ndlela ajongeka eceketheka ngakumbi, nto leyo ikhokelela kwindevu apho ummandla ophakathi ume emacaleni. Ukunciphisa amadevu kunye namacala kuya kukhokelela kwisilevu esomeleleyo, njengoko kunjalo nangaphantsi.
Iindevu ezimfutshane, ukubheja okukhuselekileyo
Ukuba ukhetha ukuba iindevu zihlala zikufutshane nomhlathi, into oyifunayo yindevu emfutshane. Rhoqo iindawo ezahlukileyo zinqunyulwe ngesitshetshe (i-sideburns, amadevu, isilevu), sizinciphise ukuba zingcamle, kodwa ulumke ngokudlula kuwe, kuba ukusikwa kungabonakala kukungeyonyani. Ngenye yezo ntshebe zijongeka zijongeka zilungile phantse kuwo onke amadoda. Kwakhona, kuba isitayile esimodareyithayo, sihamba kakuhle sobabini iimpahla ezingaqhelekanga kunye nembonakalo yolondolozo ngakumbi.
Ngenxa yoko, unokubheja kwi:
Iindevu zeentsuku ezintathu (kulula ukuzifumana kwaye azidingi mzobo ukhethekileyo)
Iindevu zendalo (kuyacetyiswa ukunciphisa izidlele nentamo kancinci)
Iindevu eziphakathi (umgca wezidlele uyehla ngandlela thile)
Iindevu ezisezantsi (i-cheek line yehliswe kakhulu)
Iindevu ezimfutshane (iinxalenye ezahlukileyo zinciphile njengoko kufunwa, kodwa kuyacetyiswa ukuba wenze ngokumodareyitha)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Chetyiwe » Iindevu ziyasikwa
IMuroexe, uphawu lwaseSpain oloyisayo loyilo lwayo kunye nezinto zalo